NTFS Ungasusi isixhobo. Buyisa iifayile ezicinyiweyo NTFS Iimoto.
DataNumen NTFS Undelete Ingaba i eyona isixhobo sokufumana kwakhona iifayile ezisusiweyo kunye neefolda NTFS ukuqhuba. Isebenzisa ubuchwephesha obuphambili ukuskena kunye nokufumana iifayile kunye neefolda ezicinyiweyo, kwaye emva koko uzifumane zonke ukuze ubuyele most idatha ebalulekileyo.
Phawula: DataNumen NTFS Undelete yifreeware. Unokuzikhuphelela, usebenzise kwaye usasaze kwakhona ngokukhululekileyo.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,469)
Ngoba DataNumen NTFS Undelete?
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen NTFS Undelete v2.0
Inkxaso kuzo zonke iinguqulelo ze NTFS iifomati.
Inkxaso yokufumana kwakhona iifayile ezisusiweyo.
Inkxaso yokufumana kwakhona imilambo enxulumene neefayile ezisusiweyo.
Inkxaso yokuskena idatha yediski eluhlaza ngokupheleleyo kwaye ukhangele iifayile ezisusiweyo ezingaphezu kwe-70 zeentlobo ezaziwayo, ngokusebenzisa inkqubo yangaphakathi yengcali enolwazi olunzulu malunga neempawu kunye nolwakhiwo lwefayile echaziweyo.
Inkxaso yokufumana kwakhona iifayile ezisusiweyo kumgqomo wokuphinda usebenzise kwakhona.
Inkxaso yokufumana kwakhona iifolda ezisusiweyo kunye nefolda yonkerarchy ephindayo.
Inkxaso yokutshintsha iifayile kunye neefolda ngokuzenzekelayo xa ikopi ikhona.
Sebenzisa ujongano olulula lwewizard ukukuyalela ukuba ungene kwinkqubo yokubuyisa ngokulula nangokufanelekileyo.
Inkxaso yokucoca kunye nokuhlela iifayile ezisusiweyo kunye neefolda ngokweendlela ezahlukeneyo.
usebenzisa DataNumen NTFS Undelete Ungasusi iifayile kwi NTFS Imoto
Ucime umphelo iifayile okanye iifolda kwifayile yakho ye- NTFS uqhuba ngempazamo, okanye ukhuphele umgqomo wakho ngaphambi kokufumanisa ukuba kukho into ebalulekileyo kuwo. Ungenzani?
Akukho maxhala. DataNumen NTFS Undelete inokukunceda. Ungasisebenzisa esi sixhobo sinamandla ukuskena ukuqhuba, ukukhangela iifayile ezisuswe ngempazamo, ukubuyisa kwaye ufumane i-most idatha exabisekileyo ibuyela kuwe.
Start DataNumen NTFS Undelete. Uya kubona i "StarIphepha leWizard, eliya kuthi libonise eyona misebenzi iphambili eyenziwayo kwinkqubo engangasuswa:
nqakraza i iqhosha ukuya kwinyathelo elilandelayo.
Phawula: Ngaphambi kokufumana kwakhona iifayile ezisusiweyo NTFS uqhuba nge DataNumen NTFS Undelete, kungcono uvale naziphi na ezinye iinkqubo.
Kweli phepha, zonke iidrive kwiikhompyuter zakho zidwelisiwe, ngolu hlobo lulandelayo:
Kuluhlu, unokukhetha enye okanye ezininzi NTFS ukuqhuba apho ufuna ukuskena kunye nokubuyisa iifayile kunye neefolda ezisusiweyo, emva koko ucofe u iqhosha ukuya kwinyathelo elilandelayo.
Kweli phepha, unokuseta ukhetho lwenkqubo yokuskena:
nqakraza iqhosha ukuya kwinyathelo elilandelayo.
Kweli phepha, iidrives ozikhethileyo kunye nezinto oseta kuzo kwinkqubo yokuskena zonke zidwelisiwe ukuze uqinisekise:
Ukuba yonke into ilungile, nceda ucofe u iqhosha ukuya kwi-starInkqubo yokuskena.
Kweli phepha, DataNumen NTFS Undelete uya kuskena ukuqhuba kwakho kunye nokukhangela iifayile ezinokubuyiseka kunye neefolda:
iya kubonisa inkqubela phambili yokuskena.
Emva kwenkqubo yokuskena, ukuba kukho naziphi iifayile okanye iifolda ezicinyiweyo ezinokufunyanwa, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Cofa iqhosha u "Kulungile", emva koko siye kwiphepha elilandelayo.
Embindini weli phepha, zonke iifayile ezisusiweyo ezifumanekayo ezinokuphinda zifumaneke ngexesha lenkqubo yokuskena kwangaphambili zidwelisiwe. Ukuba wenza u "Skena iifolda ezisusiweyo ezinokuphinda zifumaneke" kukhetho lokuskena, emva koko iifolda ezicinyiweyo ezinokuphinda zifumaneke zidwelisiwe.
Kuluhlu, unokukhetha ifayile enye okanye ezininzi okanye iifolda ofuna ukuzibuyisa, emva koko ucofe i iqhosha ukuya kwinyathelo elilandelayo. Unokucoca ulwelo okanye uludwe loluhlu ukuze ukwazi ukufumana ngokukhawuleza into oyifunayo uze ukhethe.
Kweli phepha, unokukhetha ifolda yokukhupha yeefayile ezingasetyenziswanga kunye neefolda:
Ngapha koko, unokuseta ezinye iindlela zokubuyisela apha. Emva koko, nceda ucofe u iqhosha ukuya kwinyathelo elilandelayo.
Kweli phepha, iifayile kunye neefolda ozikhethileyo ukuba uzifumane, kunye nefolda yokukhupha kunye nezinto oseta kuzo kwinkqubo yokubuyisela zonke zidwelisiwe ukuze uqinisekise:
Ukuba yonke into ilungile, nceda ucofe u iqhosha ukuya kwi-starInkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Kweli phepha, DataNumen NTFS Undelete iya kubuyisa iifayile kunye neefolda ozikhethileyo kwiidrive zakho ngokokubuyisela osikhethileyo, kwaye uzikhuphele kwifolda yemveliso oyichazileyo.
Emva kwenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukuba kukho naziphi iifayile okanye iifolda ezicinyiweyo ezifunyanwa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yomyalezo enje:
Ngoku ungavula umkhombandlela wokuphuma kwaye ungene kuzo zonke iifayile kunye neefolda.
DataNumen NTFS Undelete 2.0 ikhutshwa nge-16 Septemba 2014
DataNumen NTFS Undelete 1.5 ikhutshwa ngo-Okthobha 27, 2009
Ukuphucula ukusebenza kwenkqubo yokuskena.
DataNumen NTFS Undelete 1.0 ikhutshwa ngoJulayi 16, 2009
Inkxaso yamagama efayile ye-unicode kunye namagama efolda.
Buyisa i-lost kwaye ucime iifayile kwiidrive zakho okanye kwiidiski.
DataNumen Database Recovery 2.7 ikhutshwa nge-25 kaDisemba, 2020